Auslogic Boost Speed V4.5.12.245 — MYSTERY ZILLION
Auslogic Boost Speed V4.5.12.245
Auslogic Boost Speed V4.5.12.245 ဟာ Computer ရဲ့ Speed ကိုမြှင့်ပေးမယ့် Software လေးတွေ စုထားတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက်တွေကတော့ Software ပေါင်းစုံကို Software တစ်ခုထဲစုပေါင်းထားပါတယ်။
ဒီ Software ထဲမှာပါတဲ့ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ Software တွေကတော့
5. Registry Defragment
6. Memory Optimizer တို့အပြင်
Internet Connection ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ခြင်း၊
Windows Animation များကိုပိတ်ပြီး Speed ပိုမြန်အောင်လုပ်ခြင်း၊
File များကို Recovery ပြန်လုပ်လို့မရအောင် အပြီးဖျက်ခြင်း၊
Microsoft Office 2003 or 2007 ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ခြင်း၊
စသည် စသည် တို့အပြင် အခြားအသုံးဝင်သော Features များဖြင့်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
Size ကလဲ သေးပါတယ် 6MB ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။
Windows XP, Vista,7အားလုံးကို Support လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တော့ ဒေါင်းလိုက်ပြီး... မရရင် တော့ ပြောမယ်။ :d:d:d
ဆိုရင် Defrag လုပ်တာကို နည်းနည်းသဘောကျတယ် .. မြန်မြန်လည်း တော်တော်မြန်တယ် .. နို့မို့ဆို Vista မှာ က ဘယ်လောက် percent ပြီးနေပြီဆိုတာကို မပြဘူး.. Auslogic ကတစ်ခြား tool တွေကတော့မသုံးဖြစ်ဘူး.. အဲဒီအစား Tune UP တို့ System Mechanic စတဲ့ Pro tool တွေကို သုံးပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ တခြား Feature တွေလဲမဆိုးပါဘူး။
သုံးနေကြ Software ရှိရင် ဆက်သုံးတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်။
Software အသစ်ဆိုတော့ စမ်းရသေးတယ်လေ။